Xasanoow Ma Aadan Noqon Waxaan Ku Moodnay! W/Q Mahamud J.Farah – Puntland News
Home 2016 October 1 Opinion Xasanoow Ma Aadan Noqon Waxaan Ku Moodnay! W/Q Mahamud J.Farah
Xasanoow Ma Aadan Noqon Waxaan Ku Moodnay! W/Q Mahamud J.Farah
October 1, 2016 · by	Mohamed Sheikh · 1
Mudane Xasan Shiikh Maxamuud wuxuu September 8, 2012, Baarlamaanka ka horjeediyey barnaamidkiisii haddii la doorto u dalka ku hogaamin lahaa. Lixdii tiir ee uu dadka Somaliyeed iyo Baarlamaanka u sheegay inuu fulindoono waxay ahaayeen:
2- Soo noolaynta dhaqaalaha dalka.
3-Midnimadda iyo wada jirka ummadda Somaliyeed.
4- Soo noolaynta adeegga bulshadda, dhinaca caafimaadka iyo tacliinta.
5- Nabadaynta iyo dib u heshiisiinta
6- Dib u dhiska dalka iyo hagaajinta xiriirka caalamigga ah.
Aragtidaasi waxay noqotay mid ay u qashuuceen dadkii Somaaliyeed ee dibadda iyo gudaha ku noolaa, soona dhaweeyeen. 10kii September, 2012 waxaa la qabtay doorashadii ugu horreesay ee dalka gudihiisa lagu qabto ilaa intii ka danbaysey dowladdii rayidka ahayd. Waxaa tartankaa ka qayb-galay 22 musharax, waxaana isugu soo haray wareeggii labaad Shiikh Shariif Axmed oo helay 64 cod, Xasan Shiikh oo haystay 60, Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo ay u codeeyeen 30 iyo Cabdulqaadir Cosoble. Cabdulqaadir Cosoble iyo Cabdiwali waxay ku dhawaaqeen inay ka tanaasuleen tartanka qaybta sedexaad, waxay ugu baaqeen in baarlamaanku taageero isbalka, taas oo loo arkaayey in Xasan Shiikh codkooda siiyaan.
Waxaa ku guulaystay wareeggii sadexaad Xasan Shiikh Maxamuud oo helay 190, Shiikh Shariifna 79.
Haddaba, haddaan dib u jaleecno Xasan Shiikh iyo taariikhdiisa; Xasan ma ahayn qof la yaqaanay oo siyaasadda ka dhexmuuqday. Wuxuu xisbi layiraahdo Xisbiga Nabadda iyo Caddaaladda madax ka noqday 2011 bilowgiisii. Xisbigaas waxaa kula midaysnaa urur layiraahdo DAMMU JADIID oo micnihiisu yahay DHIIGGA CUSUB, ahna urur ka falaagoobay firqadii Al- ISlaax ee Ikhwaanul Muslimiinka. Dammu Jadiid waxay qayb ka ahaayeen kacdoonkii loogu magacday Muqaawama 2007—2009 ee ay hogaaminayeen Maxkamadihii Islaamiga iyo Al-shabaabkii qarsoonaa. Waxaa qayb weyn ka qaatay dhinaca dhaqaalaha doorashadiisii Cumar Shiikh Cali Idiris oo ahaa safiirka Somaliya ee dalka Qadar, Xisbigaasna ka mid ahaa. Waxaa dhaqaalahaa soo qaaday Faarax Shiikh Cabdulqaadir oo madax u ahaa urur samafal ah oo layiraahdo Muslim Afriiqiyah.
Dorashadii ka dib, Xasan Shiikh waxay ku qaadatay muddo dheer inuu soo magacaabo wasiirka kowaad si uu dowladda u dhiso, dadkuna waxay naynaas ugu baxsheen GURGUURTE markay muddo sugayeen, ugu danbayna wuxuu magacaabay Cabdi Farax Shirdon ( Saacid), waxaana lagu dhawaaqay wasiiro u badan xisbiga doorashada ku guulaystay ee Dammu Jadiid. Muddo gaaban dabadeed waxaa shir lagu qabtay Buruusilis lagu dhawaaqay in loo ururindoono Somaliya lacag yabaah ah oo dhan dhowr bilyan oo dollar, laakiin nasiib-darro waxaa soo baxday fadeexaddii musuqmaasuqa ee ay shaqada kaga tagtay Yusur Abraar ee ahayd madaxa bangiga dhexe ee Somaliya, ayadoo arin layaab leh oo musuqmaasuq baahsan ah soo bandhigtay, wadamadii deeqda balanqaadayna dib u gushasho bilaaleen. Si loo qanciyo deeq-bixiyaasha ayaa waxay go’aansadeen Xasan Shiikh iyo Dammu Jadiid inay ka takhalusaan oo eedda dusha ka saaraan SAACID, amarna ku-siiyeen inuu iscasilo, waxaana loo diiday inuu baarlamaanka hortago oo uu isdifaaco, si fool xun oo quursi ah buu qalabkisii u qaatay.
Ka dib, markii xilkii ka xayuubiyeen Cabdi Farax Shirdon, wuxuu magacaabay Cabdiwali Shiikh Axmed, isla markiiba waxay isku mariwaayeen wasiiradii cusbaa oo uu cabdiwali codsaday in loo badax-baneeno, Xasanna taasi ay ka dagiweysey, waxaana lagu dhawaaqay wasiiro ay garwadeeno ka yihiin Dammu Jadiid wasaaradaha ugu muhiimsan sida Maaliyadda, Gaashaadhigga, Arimaha dibadda, Arimaha Gudaha, Dastuurka iyo Garsoorka. Tasoo u muuqatay in Cabdiwali looga adkaaday. Khilaafkii ugu horreeyey wuxuu soo baxay markii la weeraray Villa Somalia iyo xaafiiska Ra’isalwasaaraha, ayadoo la ogaaday inay ka qayb-qaateen shaqaale ka shaqeeya madaxtooyada, waxaana soo kala dhexgalay Xasan iyo Cabdiwali kala shaki. Cabdiwalina wuxuu ka codsaday Nicholas Kay ( u qaabilsanaha Qaramada middoobay arimaha Somaliya) in baaritaan caalami ah lagu sameeyo weerarkaas, taasna ma dhicin; Xiriirka Xasan iyo Jubbaland oo meel xun maraayey, Dammu Jadiidna ciidan uu hogaaminaayey Barre Hiiraale ku ogaa Kismaayo agteeda ( Goobweyn) ayuu Cabdiwali go’aan ka qaatay nabadaynta Kismaayo asagoon la tashan Xasan Shiikh taasna waxay sii kordhisay kala fogaantii hore. Ra’isalwasaaruhu wuxuu xilkii ka xayuubiyey Agaasimihii Nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed ( Sanbalooshe) oo abti u ahaa madaxweynaha, xisbigiisa ka tirsanaa, waxaase kasii xanuun badnayd markuu Faarax Shiikh Cabdulqaadir oo ahaa gacanta midig ee madaxweynaha uu ka qaaday xilkii wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda, una wareejiyey wasaaradda xanaanada xoolaha, Faraxna ku gacan-sayray, Xasanna ku taageeray diidmadaas, arintuna qir iyo qir noqotay. Waxaa khilaaf dhinaca Dastuurka ah ka dhex-aloosmay Puntland iyo Xasan, ka dib waxaa Garoowe ka dagay Cabdiwali Shiikh, wuxuuna heshiis aan ka farxin Madaxweynaha uu dhexmaray Puntland iyo Ra’isalwasaaraha; soo noqoshadii Cabdiwali Shiikh waxaa madaxweynaha iyo Xisbigisa go’aansadeen in xilka laga qaado Ra’isalwasaaraha, muddo dheer baa shaqadii dowladdii iyo tii Baarlamaankiiba dayacnaayeen arintu meel xun gaaray, ugu danbayntiina gacmo shisheeye ayaa soo fara-galiyey, waxaana Cabdiwali Shiikhna lagu qanciyey inuu kursiga banneeyo.
Haddaba, aan aragno ballanqaadkiisii iyo waxa uga hirgalay:
⦁ Xasilinta Dalka: intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2014 waxaa la weeray Maxkamadda Gobolka Banadir, laba jeer Madaxtooyada, Xarunta Baarlamaanka, Celcelis dhowrkii biloodba laba hotel,Makhaayado, UNDP, Airporka, waxaa kaloo la dilay 18 Xildhibaan, Saraakiil ciidan, Wariyayaal iyo dad shacab ah oo fara badan; Shabaabna wali waa sideedii.
⦁ Soo Noolaynta Dhaqaalaha Dalka: waxaa la musuq-maasuqay dhaqaalihii adduunku ugu taba-rucay dowladda siday dadka wax ugu qaban lahayd, bangigii dhexe iyo khasnadii Dakedda lacagtii ku jirtayna maalin cad baa lala baxay. Somaliya waxay noqotay wadanka koowaad ee adduunka ugu wax isdabamariska badan ( Musuqmasuq badan), waxaa ku xiga waqooyiga Kuuriya.
⦁ Nabadaynta iyo Dib u Heshiiseenta: Gobalada dhexe dadkii ku noolaa waxay u kala qaysan yihiin, Galmudug, Cadaado magaalo madax u tahay, Maamulka gobalada dhexe ee Sunna Wajamaaa ee Dhuuse-mareeb iyo Caabudwaaq oo haddaba dhinac u ciirta. Gobalka Mudug iyo Gaalkayo oo aan laysu galin, walina kala qoqoban; Hiiraan iyo Jowhar oo aan wali la heshiisiin, maamulna loo yagleeli-waayey.
⦁ Doorashadii iyo Dib u Eegistii Dastuurka: Dastuurkii laysku ogaa in dib loo eego waxba lagama qaban; Qaynuunkii lagu dhaqi lahaa magaalo madaxda Muqdisho wali waa maqan yahay; Dorashadii qof iyo codkiisa ahayd ee loo dareeri lahaa 2016 waa lagu hungoobey oo waxaa hadda lagu badalay mid dadban oo macbil ah oo laga maarmi-waayey.
Aragnay waxtar-xumada mudane Xasan Shiikh iyo waqtiga qaaliga ee inaga lumay, Ilaah waxaan ka sugaynaa inuusan dib danbe ummaddaan dhiban ugu soo celin, asagana waxaan ka codsanaynaa in uusan dhib intaan ka badan u gaysan maatadaan.